Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Magaalooyinka ugu Fiican Mareykanka ee Ka Badbaaday Apocalypse Zombie
Jebinta Wararka Safarka • Crime • dhaqanka • News • Waajib ah • Ammaanka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xusuusnow: Haddii aad waligaa la kulanto zombie dhab ah, ujeedo madaxa!
Halkee bay nool yihiin fursadda ugu fiican ee ay isku difaaci karaan inta lagu jiro kacdoonka zombie?
Surf City USA waxay ka badan tahay magaalada xeebta California ee caadiga ah.
Inta badan magaalooyinka ku yaal xagga hoose ee darajaynta waxay ka soo jeedaan Galbeedka.
Waxay dhahaan laba madax ayaa ka fiican hal, taasina waa run marka ay timaado burburinta qaraha zombie.
Sannadkii la soo dhaafay wuxuu ahaa mid duurjoog ah - si lama filaan ah - laakiin maxaa ka sii xumaan kara? Zombies.
Sidee baad uga badbaadi kartaa apocalypse zombie? The CDC waxay miisaameysay mowduuca, inkasta oo carrab-ku-jira-dhabanka.
Laakiin dhacdada (aan macquul ahayn?) Ee kacdoonka zombie, xaggee bay nool yihiin fursadda ugu wanaagsan ee ay isku difaaci karaan?
Kusoo dhawaaday Hagaha CDC ee Diyaargarowga Zombie 101, khubarada ayaa ku qoday xabaasha xogta si ay u qiimeeyaan 2021 Magaalooyinka ugu Fiican ee Badbaada Apocalypse Zombie.
Qiimeynta ayaa la barbardhigay 200 ee ugu weyn US magaalooyinka ku yaal 23 tilmaamood oo muhiim u ah u-diyaargarowga zombie-laga bilaabo saamiga dadka ee caafimaad jireed oo wanaagsan ilaa saamiga guryaha la heli karo ee leh dabaqyada hoose si ay u helaan ugaarsiga qalabka.
Fiiri 10 -ka magaalo ee ugu fiican (iyo 10 -ka ugu liita) ee lagula dagaallamayo dadka aan dhimanayn, oo ay ku xigto xoogaa tilmaamid iyo iftiimin ah oo ku jira warbixinta.
2021 Magaalooyinka ugu Fiican ee Badbaada Apocalypse Zombie